Maraykanka Oo Soomaaliya Iyo Kenya U Soo Bandhigay Hab Ay Ku Dhameeyaan Dacwada U Dhaxaysa Ee Badda | Saxil News Network
Kyle McCarter oo wareysi siinayay telefishinka Citizen ee ka hawlgala Kenya ayaa ka dhawaajiyay in Mareykanka uu ka shaqeynayo sidii uu fududeyn lahaa xal ka gaadhista khilaafka ka taagan dhul badeedka Kenya iyo Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay inuu rumaysan yahay in labada dal ay ilaalin doonaan deris wanaaga.
Safiirka oo wax laga weydiyay, aragtida Mareykanka ee ku aadan muranka badda, waxaa uu sheegay in wada hadal lagu dhameeyo muranka isla markaasna ay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee lagu soo afjarayo arrintaas.
Kyle McCarter waxaa uu sidoo kale sheegay in labada dal aanay kala maarmi karin gaar ahaan xidhiidhka dhaqaale iyo iskaashiga ku aadan arrimaha amniga sidaas darteed ay muhiim tahay inay isku yimaadaan si ay xal uga gaadhaan khilaafka ka dhex taagan.
“Mareykanka waxaa uu ka shaqeynayaa sidii uu fududeyn lahaa xal ka gaadhista muranka, waxaan rumeysanahay in Kenya iyo Soomaaliya ay dhowri doonaan deris wanaaga” ayuu yidhi safiirka Mareykanka u fadhiyo dalka Kenya.